News | Ainmat.com - Myanmar Blog
Author : DeeDoe - Tuesday, November 16. 2010
ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းတဲ့ “လွတ်လပ်ခြင်း” ကို
တို့ရဲ့ နှလုံးသားတွေ ပြင်ထားလိုက်အုန်း။
Categories : News , Comments :2Comments
ဘောလုံး ၀ါသနာရှင်များသို့ 
Author : PremierHighlight - Wednesday, June 23. 2010
Latest football videos, highlights, news and results
Categories : News , Comments :
Author : luthitlaypar - Thursday, April 15. 2010
၁၅-၄-၂၀၁၀ ရန်ကုန် သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်တစ်ခုမှာ ဗုံးကွဲတယ်လို့ ဖတ်ရပါတယ်
ဓါတ်ပုံတွေပါတင်ထားတဲ့ NYI LYNN SECK 18 + DEN ဘလော့ဂ်မှာ အတော်စုံစုံလေး ရေးထားပါတယ်
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက comment တွေပါ၊ ဆဲထားလိုက်တာ မိုးမွှန်နေရော
အဲဒါတွေ လိုက်ဖတ်ရင်း ရယ်လဲ ရယ်ရ၊ တရားလဲကျ၊ အချိန်လဲ အတော်ကုန်သွားတယ်။
Defined Tags : News
Author : သိုး - Thursday, December 3. 2009
ရန်ကုန်အခြေစိုက် လူငယ်ကဗျာဆရာများ စုစည်း၍ ၂၀၀၉ သြဂုတ်လမှ ၂၀၁၀ ဇူလိုင်လအတွင်း မဂ္ဂဇင်းများတွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြခဲ့သော ကဗျာများအား ဖတ်ရှုပြီး `၂၀၁၀ မောင်ချောနွယ်ကဗျာဆု´ ရွေးချယ် ချီးမြှင့်သွားရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
Categories : News , Comments :3Comments
ဟိဂျဗ်ဘုရ်ကအ် အတွက် အသက်ပေးခဲ့သူ
Author : electric - Monday, November 30. 2009
အသတ်ခံ လိုက်ရချိန်တွင် မရ်ဝဟ်၌ ကိုယ်ဝန်လေးလရှိနေသည်။ (3) နှစ်သားအရွယ် သားလေးက မိခင် ရက်ရက် စက်စက် အသတ်ခံ နေရသည်ကို ကြောက်လန့်အားဖြင့်ကြည့်နေသည်။ သူ၏ခင်ပွန်း အလ်ဗီအက္ကားဇ်က ဇနီးကို ကယ်ရန်ပြေးလာသောအခါ တရားရုံးရှိ လုံခြုံရေးများက သေနတ်ဖြင့် ပစ်လိုက်သဖြင့်..............................
စင်္ကာပူမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် မြန်မာစာပေဟောပြောပွဲ ကျင်းပမည်။
Author : May15 - Friday, November 27. 2009
စာပေ၀ါသနာပါသူတွေ သွားချင်ရင်သွားလို့ရအောင် သတင်းပေးတာပါ။ သိပြီးသူများလည်း သိပြီးလောက်ပါပြီ။
Categories : News , Comments : 1 Comment
Author : flower.cherry6 - Monday, November 23. 2009
Categories : News , Comments :4Comments
Author : electric - Thursday, November 19. 2009
နယူးဝိ(ခ)မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအဖွဲဝင်နှင့်ABC News မှနိုင်ငံရေးခွဲခြားစိပ်ဖြာသူ
Author : flower.cherry6 - Tuesday, November 17. 2009
အနောက်နိုင်ငံတွေကပြောတဲ့လူ့အခွင့်အရေး(ဆာရာယေဗို၊ ဘော့စနီးယား )
Author : electric - Wednesday, November 11. 2009
အမှောင်ထဲတွင်သျှမိုရ့်ကိုပြန်ရှာရန် ခရီးထွက်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း အသိေ
Author : schmo - Friday, October 2. 2009
ဘယ်ရောက်နေမှန်း သူ့ကိုယ်သူပင် မသိသောသူက ဘာမှမမြင်ရသော ထိုနေရာတွင် အမှောင်ထဲတွင် ထွက်ပြေးပျောက်ဆုံးသွားသော သျှမိုရ်တစ်ယောက်ကို လိုက်ရှာဖွေရဦးမည်။
Author : schmo - Sunday, September 27. 2009
နိုင်ငံတကာမှ ဓါတ်ပုံပညာရှင်များစွာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည့် The Western Photographers Association USA မှကျင်းပသော အထင်ကရပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် Salon of L.A ပြိုင်ပွဲတွင် ယခုလို မြန်မာနိုင်ငံမှ ဓါတ်ပုံပညာရှင်များက ဆုတံဆိပ်ပေါင်း ( ၄၄ )ခု ဆွတ်ခူးခဲ့ပါသည်။
ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားနှစ်ခုလုံးတွင် ရွှေတံဆိပ်ဆုဆွတ်ခူးခဲ့သော ဓါတ်ပုံပညာရှင်များနှင့် အခြားဆုတံဆိပ်များဆွတ်ခူးပေးခဲ့သော မြန်မာ့ဓါတ်ပုံပညာရှင်များ ကို ဤဆောင်းပါးဖြင့် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာ မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။